Ahoana ny fomba hanokafana Dispensary Illinois | Nanazava ny varotra rongony
Ahoana ny fomba hanokafana dispensary cannabis any Illinois
Ahoana ny fomba hanokafana dispensary rongony any Illinois?
Fanokafana ny dispensary cannabis nofinofisin'ny maro atosiky ny hazondamosina maitso amin'ny rongony rehefa mihalalaka ny fanjakana. Ny orinasa rongony THC dia antenaina hitombo eo amin'ny 20 Miliara amin'ny taona 2020 ka hatramin'ny 80 Miliara amin'ny 2030 satria mihamaro ny fanjakana manara-dalàna. Androany, hifantoka amin'ny fanokafana dispensary amin'ny tsena mipoitra ao Illinois isika.
Tamin'ny taona 2019, nanjary fanjakana faha-11 i Illinois mba hanome ara-dalàna ny rongony fialamboly. Io ihany koa no fanjakana voalohany nahavita izany tamin'ny alàlan'ny lalàna.
Miisa 55 izao ny dispensary rongony ara-pitsaboana manana fahazoan-dàlana ao amin'ny fanjakana, satria ara-dalàna ny rongony rongony nanomboka ny taona 2014.
Dingana amin'ny fanokafana ireo fanafody vaovao rongony any Illinois
mitentina 500,000 $ hatramin'ny $ 1,000,000 ny dispensia Illinois.
Illinois dia hanome lisansa fivarotana rongony vaovao 75 ho an'ny mpangataka amin'ny Mey 2020 (Ela), miaraka amin'ny rindranasa azo natao nanomboka ny volana oktobra 2019. Miaraka amin'ny vola miditra azon'ireo dispensary rongony amina miliara dolara sy miakatra, ireo fivoarana ireo dia manararaotra manome tombony lehibe tokoa. Na izany aza, fanokafana sy fizarana dispensary dia raharaham-barotra sarotra.
ny vidiny hanokafana ny varavaranao any Illinois dia mety mitentina $ 500,000 ka hatramin'ny tapitrisa tapitrisa arakaraka ny vidin'ny trano sy tany
Masiaka ny fifaninanana ho an'ireo dispensera vaovao any Illinois.
Illpensary fampiharana an'i Illinois Cannabis
1. Manomàna drafitra momba ny fandraharahana
Inona no fanontaniana manan-danja indrindra ho voavaly ny drafitr'asa momba ny dispensary cannabis?
Ohatrinona ny manokatra dispensary rongony?
Mila drafitra fandraharahana ianao raha mitady hanokatra dispensary any Illinois. Misy lafin-javatra maro tokony hosaronan'ny drafi-pandraharahanao. Ireo dia hazavaina amin'ny antsipiriany etsy ambany:
Famaritana ny vokatra / serivisy - Midika izany ny fomba kasainao hampandehanana ny dispensary sy ireo lafiny miavaka momba azy. Miezaha ho voafaritra araka izay azo atao. Ampidiro ny antsipiriany momba ny karazana voninkazo izay haparitanao sy ny toerana hanomezanao azy ireo.
Market Market - Ity fizarana ity dia misy ireo fomba ampiasainao hamantatra ireo mpanjifanao kendrena ary ny fiantraikan'ity tahiry ity amin'ny fivarotana, ny asa aman-jotra ary ny vidinao. Ampiasao foana ny isa mivaingana (manamarina avy amin'ny antoko fahatelo) fa tsy tombanana.
Mpifaninana - Ahitana antsipiriany momba ny orinasa hafa izay hifaninananao aminy, na mivantana na ankolaka. Inona avy ireo hery sy fahalemeny, ary ahoana no fomba hanasongadanao ny orinasanao.
Tarika mpitarika - Ity fizarana ity dia misy famintinana ireo fahazoanao sy ireo ekipa mpitantana anao. Azonao atao ny mampiditra ny traikefa fampandrosoana amin'ny sehatry ny sehatra hafa, ny fahaiza-mitarika na ny serivisy mpanjifa.
Fitantanam-bola - Ity fizarana ity dia mety mahatahotra. Izy io dia tafiditra amin'ny fandrafetana teti-bola mazava sy fohy. Tokony hampidirinao ny vinavina ara-bola maharitra (hoy ny 5 taona), ka ny fandaniam-bola, ny tombony ary ny vinavina isan-taona.
Fepetra ilaina any Illinois - Azonao atao ny mampiditra antsipirihany momba ny fandrakofana ny rafitra fiarovana, ny fitaterana vokatra azo antoka, ny fanaraha-maso ny vokatra, ny drafitry ny fako ary ny zavatra takian'ny fanjakana. Marihina fa mety ho ampidirina ao amin'ny fangatahana anao izany.
Soso-kevitra amin'ny mpampindram-bola - Mampiditra ny fomba hanomezanao lanja ny fizaranao raha atolotra ny drafitra amin'ireo mpampiasa vola ianao. Mankanesa amin'ny CPA iray mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny lalàm-panjakana sy federaly ianao.
2. Fahazoana lisansa fivarotana cannabis
Ny fahazoana lisansa fivarotana cannabis amidy any Illinois, na fanjakana hafa dia mety ho sarotra sy lafo be. Ny departemanta Illinois momba ny fitantanana ara-bola sy matihanina (DFPR) dia asaina manao fahazoan-dàlana cannabis any Illinois. Misy fepetra hentitra ho an'ireo tompona dispensary.
Ny mpangataka dia tsy maintsy mizaha taratasim-bola, manafaka ny fiverenan'ny hetra feno mandritra ny taona maro ary manambara ny trosa rehetra na ny tsy fahampian'ny trosan'ny mpianatra, ny fiantrana na ny fanampiana an-janany. Tsy maintsy mametraka fahazoan-dàlana fandefasana fahazoan-dàlana amin'ny olon-dehibe ianao miaraka amin'ny fangatahana vola tsy mitaky $ 5,000 tsy averina. Vantany vao nahazo fahazoan-dàlana ianao dia misy $ 30,000 fahazoan-dàlana mandritra ny 12 volana voalohany.
30,000 50,000 $ ny fanavaozana ny fahazoan-dàlana isan-taona. Ianao koa dia takiana mba hanaporofoana $ XNUMX amin'ny escrow ary hampiseho ny kapitalisa sahaza. Mariho fa misy sarany hafa fanampiny mifandraika amin'ny fandidiana dispensary.
Anisan'izany ny saram-panavaozana $ 25,000 amin'ny fanavaozana ny fisoratana anarana ary $ 50 (tsirairay) fanavaozana ny maso ivoho, fanoloana kara-panondro ary sarany fanoloana fisoratana anarana. Ny fahazoan-dàlana hizaran-tany any Illinois dia mifototra amin'ny rafitra 250 teboka. Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo fomba nanamarihana ny isa:
Ny fiarovana sy ny fitandremana an-tsoratra
Drafitrasa momba ny asa, vola, drafi-gorodona ary drafitra fiasa
Ny fampifanarahana ny drafi-piofanana momba ny olombelona
Fahalalana / traikefa mifandraika amin'ny otrikaretina
Asa amin'ny asa sy ny asa
Marihina fa handany loharanom-bola be dia be ianao amin'ny fanarahana ny lalàna, ary mila manomana mialoha izany ianao.
3. Mitadiava toerana mety amin'ny Disparianao
Ireo lisansa fivarotana cannabis 75 amin'ny famoriam-bola an-tsokosoko amboarina any Illinois dia nizara roa amin'ireo faritra 17 Bureau of Labor Statistics (BLS) ao amin'ny fanjakana. Natao izany mba hiantohana ny fiparitahana ara-jeografika tsara eo amin'ny dispensaries cannabis. Ny dikan'izany dia tsy maintsy hipetraka ao anatin'ny faritra BLS ny dispensante anao amin'ny antsipiriany momba ny fangatahana fahazoan-dàlana.
Raha vantany vao nankatoavina ny fahazoan-dàlana, dia hanana 6 volana (180 andro) ianao hisafidianana toerana ara-batana ho an'ny fivarotana fivarotana. Tsy maintsy mifanaraka amin'ny fepetra takiana ny toerana. Ireto misy antsipiriany etsy ambany:
Tsy maintsy ilaina amin'ny fidirana ampahibemaso
Tsy maintsy misy làlan-kizorana manamora ny fotoam-bavan'ny safidim-doza
Tsy maintsy ampy ny habeny, jiro, famokarana herinaratra, fitantanana ny vokatra ary fitahirizana
Tsy maintsy manana toeram-pivarotana ampy tsara sy fidirana miditra amin'ny tanana.
Tsy tokony ho hita eo afovoan'ny 1,000 XNUMX metatra amin'ny toeram-pivarotana hafa, sekoly, faritra onenana na toeram-pivavahana.
Raha jerena ireo fepetra ireo dia mitentina 300,000 tapitrisa ka hatramin'ny 1 tapitrisa dolara ny fahazoan-dàlana fitarainan'ny fitarainana, arakaraka ny habeny sy ny fandaharana ary ny fahasarotana. Ilaina ihany koa ny miantoka fa ny tompon'ny trano izay misy ny fotoam-pivoriana mandaitra dia tsara amin'ny sehatry ny fandraharahana. Ny tompona fananana sasany dia mety tsy hanohana orinasa mifandraika amin'ny otrikaretina noho ny tsy fanarahan-dalàna federaly, mety ho tompon'andraikitra na fanerena amin'ny fampiharana ny lalàna.
4. Mahazo ny vokatrao
Araka ny lalàn'i Illinois dia takiana ny fotoam-bidy cannabis mba hanome vokatra maro avy amin'ny toeram-pambolena cannabis isan-karazany. Ny lisitr'entana azo amidy amin'ny fotoam-pivarotana iray avy amin'ny mpamboly tokana dia tsy tokony hihoatra ny 40% amin'ny famoriam-bola rehetra. Izany dia miantoka fa ny mpanjifanao manana karazany maro. Io koa dia mahakivy ireo mpamboly amin'ny tsy mitahiry afa-tsy ny tahiriny raha vao mametraka fotoam-pianarana.
Ny fanjakana sasany dia mitaky ny firenen'ny dispensia mampitombo ny fihenany. Soa ihany, tsy izany no an'ny Illinois. Na izany aza, azonao atao ny mampifantoka ny masonao amin'ny fametrahana trano fambolena rehefa rava ny fotoanananao. Tsara ny manome loharanom-bavony amin'ny endriny samihafa. Ny mpanjifa samihafa dia aleon'ny vokatra samihafa toy ny edibles, concentrates, dabs na menaka.
5. Tsidiho ny Dispensary momba ny otobika anao
Ny tsena dia mifidy mamaritra izay mampiavaka ny orinasanao sy ny fomba ampahafantaranao izany amin'ny sehatry ny mpanjifa. Na izany aza, ny marketing amin'ny dispensary cannabis dia misy ireo zavatra izay tokony ho fantatrao. Any Illinois, tsy afaka miditra am-barotra ianao izay mamitaka na diso, mampiroborobo ny fiadiana tafahoatra, misy ny sarin'ilay ravina na rantsankazo na mampiseho ny tena fanjifana ny vokatra.
Mety tsy hainao koa ny mitaky fanafody na fitsaboana fitsaboana momba ny vokatrao na mampiasa sary afaka manintona ny zaza tsy ampy taona (sariitatra, biby fiompy na kilalao). Ary koa, tsy azonao atao ny mamoaka ny fe-potoana amin'ny radio, fahitalavitra na fiara fitateram-bahoaka. Ny sehatra marketing tsara indrindra ho an'ny dispensaries cannabis dia misy ny tranonkala, haino aman-jery sosialy, fampiharana finday (Sarin'ny Leafly sy ny ahi-dratsy), gazety ary fandaharana tsy mivadika / referral.
Fepetra ilaina amin'ny fividianana rongony ara-dalàna ao Illinois amin'ny Dispensary
Tamin'ny 2013, ny fanjakan'i Illinois dia nanao fidirana marijuana ho an'ny marary izay mila izany amin'ny fepetra ara-pitsaboana isan-karazany. Nanangana fandaharan'asan'ny mpanamory ny fanjakana ary nantsoiny hoe Compassionate Use of Medical Cannabis. Rejistra iray misy marary no nosoratana ka ny marary mahay sy ny mpiambina voatondro ho arovany dia harovana amin'ny fanenjehana sy fisamborana.
Miseho izao ny 2019 ary ny fanjakana dia manao rongony bebe kokoa noho izany. Volavolan-dalàna manara-dalàna izay hahafahan'ny olona mividy, mitondra sy mivarotra rongony ho an'ny fialamboly dia raikitra. Ilay volavolan-dalàna, izay fanitsiana ny lalàna teo aloha momba ny rongony dia hametra ny rongony toy ny alikaola ary mamela ny fampiasana olona mihoatra ny 21 taona.
The Ny lalàna mifehy ny rongony sy ny hetra dia mamaritra ny karazana mpanjifa avela hanatrika izany ny rongony marijuana. Ireo mponina ao Illinois dia afaka mividy marijuana amin'ny tanjona fialamboly fa miaraka amin'ireto fepetra ireto;
1. Asehoy porofon'ny vanim-potoana alohan'ny fividianana.
2. Ny fivarotana, ny famindrana na ny fitsinjarana marijuana ho an'ny zaza tsy ampy taona dia hijanona ho sazy azo sazy.
3. Ny fiaran-dalamby eo ambany fitarihan'ny cannabis dia hijanona ho tsy ara-dalàna.
4. Ny fivarotana rongony dia tokony hatao amin'ny fomba ara-dalàna amin'ny olompirenena mandoa hetra.
5. Ny rongony dia hosedraina ary hosoratana amin'ny fomba mety ho tombontsoan'ny mpampiasa.
6. Ny mpividy dia omena ny fampahalalana rehetra misy momba ny mety ho fiantraikany ratsy ateraky ny cannabis ampiasaina noho ny fikarohana miorina amin'ny porofo.
Ny fahatsinjovana orinasa miroborobo
Miaraka amin'ny lalàna vaovao napetraka tsy ho ela dia fotoana fohy vao mivoatra ny indostrian'ny cannabis ho lasa orinasa marobe. Ny mponina dia afaka manararaotra ny fahazoan-dàlana isan-karazany napetraka ho an'ny mpamboly sy ny tompona. Mandeha amin'ny fitsipika ao anaty volavolan-dalàna vaovao dia tena antenaina fa tsy ho ela i Illinois dia ho lasa zaridaina cannabis ary tsy misy milaza hoe inona avy ny fotoana vaovao mety hitranga ao anatin'izany.
Karazana fahazoan-dàlana isan-karazany any Illinois
Misy karazana fahazoan-dàlana telo eo ambanin'ny sokajy dispenser izay mamaritra ny fomba ahafahan'ny mpandraharaha mamatsy marijuana ao amin'ny fanjakana. Anisan'izany ny telo;
1. Ny fahazoan-dàlana voalohany amin'ny alàlan'ny fanabeazana momba ny fitrandrahana olon-dehibe
2. Ny fahazoan-dàlana mitaky ny fanabeazana momba ny antitra.
3. Ny fahazoan-dàlana fikambanan'ny olon-dehibe mampiasa ilay lisansa fahazoan-dàlana.
Torolàlana ho an'ny fahazoan-dàlana voalohany amin'ny fampiasana ny fahazoan-dàlana ho an'ny olon-dehibe.
Ity no fahazoan-dàlana ho an'ireo mpaninjara rongony voamarina izay navoaka tamin'ny alàlan'ny Fangorahana ny fividianana Pilotram-panafody rongony. Ny fangatahana ireo mpangataka fahazoan-dàlana dia takiana mba handoa sarany fangatahana $ 30,000 (tsy azo averina). Ho takiana aminao ihany koa ny sarany tsy azo ivalozana ho an'ny fampandrosoana orinasa rongony izay tsy azo averina koa. Ny sarany dia hampandoavina 3% amin'ny varotra dispensary hatramin'ny volana Jolay 2018 ka hatramin'ny Jolay 2019 na sarany $ 100,000 raha toa ka mihoatra io vola io ny isan-jato isan-jato. I Yo koa dia mila mampiseho ny famantarana momba ny drafitra fampidirana fitoviana ara-tsosialy.
Torolàlana ho an'ny fahazoan-dàlana amin'ny fampiatoana ny fametrahana fepetra
Ny fahazoan-dàlana dia omena amin'ny alàlan'ny rafitra meritaly izay ametrahana ny lisitra ambony indrindra. Zava-dehibe ny manamarika fa ny fahazoan-dàlana dia tsy mamela ny varotra na ny fividianana ny cannabis na ny vokatra voararan'ny cannabis. Ireo nahazo izany fahazoan-dàlana dia hanana fotoana maharitra 180 andro manomboka amin'ny daty fankatoavana hamaritana toerana misy azy ireo hamolavola ny fivarotany.Nizarana ny fahazoan-dàlana hampihena ny vidin'ny vola takian'ny mpiantoka vaovao hiditra ao amin'ny orinasa ary manana fangatahana fampiharana tsy refesina $ 5,000. Tsy maintsy manavao ny fahazoan-dàlana isan-taona amin'ny fisondrotana $ 60,000 2020 ny fahazoan-dàlana. Tamin'ny Mey 75 dia nanantena ny hamoaka fahazoan-dàlana XNUMX toy izao ny fanjakana.
Torolàlana ho an'ny fahazoan-dàlana amin'ny fikambanan'ny olon-dehibe
Ity no fahazoan-dàlana izay nampientanentana ny rehetra liana. Ny fahazoan-dàlana dia mamela ny orinasam-barotra hividianana rongony amin'ny mpamboly, mpanentana fambolena, fikarakarana fikambanana na dispensaries hafa. Amin'ity karazana lisansa ity dia manana hazavana maintso mavesatra hamidy cannabis sy vokatra novonoina, paraphernalia, masomboly ho an'ny mpamatsy na mpividy hafa. Ireny koa dia handeha mialoha mba hivarotra ireo marary mampiasa cannabis hitsaboana ny toe-pahasalamana.
Raha mangataka fangatahana fahazoan-dàlana dia tsy maintsy mizara ampahany amin'ny saram-pianarana tsy averina mitentina $ 30,000 ny tsirairay Raha vao omena ny fahazoan-dàlana dia tsy maintsy mahazo fanavaozana ny fotoampitantanana taorian'ny herintaona ary mitentina 60,000 $ izany. Ny fahazoan-dàlana toy izany dia efa navoaka manerana ny fanjakana miaraka amin'ny sampana nanantena ny hanome lisansa 110 hafa indray ny 21 desambra 2021.
Drafitra fandraharahana mila manana fahazoan-dàlana Dispensary ianao
Misy fepetra hentitra azo raisina rehefa miomana hanao ny fangatahana ho toy ny dispenser cannabis. Raha mitady ny fahazoan-dàlana ianao dia mila ny drafitra fandraharahana manaraka;
1. Modely amin'ny teti-bolanao
2. Modely amin'ny drafitry ny marketing
3. Lisitry ny firaketana marary
4. Takelaka drafitra fiarovana
5. ny maodely mifanaraka amin'ny fahazoan-dàlana
6. Drafitra drafitry ny mpiasa
7. Tetikasa drafitra iray ahafahana mampianatra marary
8. Lisitry ny fanaraha-maso ny famoronana
9. Laminasa drafitra fandidiana
Marijuana ho an'ny tanjona fialamboly
Rehefa nahazo ny seza governora ho an'ny fanjakan'i Illinois tamin'ny J 2018 i JB Pritzker, dia nanitsy avy hatrany ny fifantohany ireo mpanao lalàna mba hiasa haingana amin'ny fanavaozana ny ara-dalàna ny marijuana. Ny fahazoana rongony amin'ny lisitry ny akora voarara sy ny fampidirana azy io dia iray amin'ireo fampielezan-kevitra nampanantena fa ny tompon'andraikitra tamin'ny andron'ny fampielezana azy.
Na dia efa akaiky io lalàna vaovao io dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fandaharan'asan'ny mpanamory cannabis amin'ny fomba rehetra. Ny lalàna dia mifantoka indrindra amin'ny fampitomboana ny isan'ireo dispensaries hiandrasana ny firongatry ny orinasa cannabis amin'ny fomba miadana sy voafehy. Hanohy ny fitsaboana ilaina ny fangatahana mpiaro ny fananana satria mahita ny fomba bebe kokoa hampiharana ireo lalàna vaovao amin'ny fepetra mitovy amin'ny distrika rehetra. Miaraka amin'ny fepetra rehetra ilainao amin'ny fampiharana mahomby, ireo izay maniry hitsambikina ao anaty orinasa dia mila fitambaran'ny vintana sy ekipa mpanohana tsara. Manova ny fotoana any amin'ny fanjakan'i Illinois sy ny kolontsaina cannabis dia afaka manantena ny hahazo tsara indrindra amin'ny haingam-pandeha, vokatra, vokatra cannabis.
Miaraka amin'ny antony manosika sy fidirana amin'ny loharano ilaina, ity torolàlana ity dia afaka manampy anao amin'ny fomba mahomby manomboha dispensary rongony mahasoa ao Illinois. Zava-dehibe ny manamarika fa ity dingana ity dia mitaky fotoana na dia manana ny enti-manana aza ianao.
Raha jerena ny dingana fahazoan-dàlana, mitady toerana mety sy mamolavola ny fivarotanao fivarotana mba hahafeno ny fepetra takian'ny fanjakana dia mety maharitra herintaona mahery.
Ny indostrian'ny rongony dia voafehy mafy ary mahazo fanampiana avy amin'ny indostria, ary azo atolotra ny manam-pahaizana momba ny asa.
Proformas cannabis ho an'ny dispensaries sy Grows
Cannabis Proformas ho an'ny Dispensaries sy Grows cannabis proformas ho an'ny dispensaries ary maniry dia lehibe ho an'ny drafi-piasan'ny cannabis. Betsaka ny mombamomba ny proforma misy an-tserasera saingy inona ny proforma cannabis ary ahoana no ahafahanao manao fiheverana marina ...